Ukucoca kunye nokukhawulezisa ukusebenza kwePC yakho ngeNero TuneItUp | Iindaba zeGajethi
Njengoko iinyanga zihamba, ngakumbi ukuba singomnye wabo basebenzisi abathanda ukukhuphela nasiphi na isicelo esiza kwiscreen sabo, okanye nangona singathandanga ukuba silumke kakhulu ngala maphepha ewebhu siwatyelelayo, i-antivirus yenza konke abanako kodwa akukho mntu wenza imimangalisoKusenokwenzeka ukuba ukusebenza kwePC yethu kuqale kancinci kunesiqhelo, kuhamba kancinci kunesiqhelo.
Isicelo ngasinye esitsha esisifakayo sishiya umkhondo kwiPC yethu, umkhondo ongaze ususwe xa sisusa usetyenziso. Ukuba ibikukulandela umkhondo wefayile kuphela, kulungile, kodwa xa kukho izicelo ezininzi esizifakileyo saza emva koko sasicima, lo mkhondo uba yingxaki yokusebenza kunye nokusebenza kwekhompyuter yethu. Kulapho uNero TuneiTPro aqala khona ukusebenza.
Eyona nto inokwenzeka, indala kule ndawo, uyazi malunga nenkampani yeNero, inkampani ebisoloko yentengiso iminyaka emininzi kwaye eyaqala ukubonelela ngezicelo ukuze ikwazi ukutshisa iifayile, umculo kunye neevidiyo kwiiCD nakwiiDVD. Ngapha koko, xa besithetha nabahlobo malunga nokukopa okanye ukuhambisa ulwazi, sisebenzise igama uNero ngokungathi sisicelo sendalo seWindows, njengoko kunokwenzeka ngeDanone okanye iMascara.
1 Wenza ntoni uNero TuneItPro?
2 Iimpawu zeNero TuneItPro
2.1 Ukulawula usetyenziso lwangemvelaphi
2.2 Ukuphucula inkqubo yokusebenza
2.3 Abaqhubi bahlaziywa ngawo onke amaxesha
2.4 Ulawulo lokusetyenziswa
2.5 Ukuhamba ngokugudileyo
3 Raffle iphepha-mvume eli-2
Wenza ntoni uNero TuneItPro?
UNero ukwazile ukuziqhelanisa neemfuno zabasebenzisi kwaye ebesandisa uluhlu lweemveliso ezijolise kubasebenzisi kungekuphela kwasekhaya, kodwa nakwishishini. Isicelo seNero TuneItPro yenye yeefayile ze- Ezona zicelo zibalaseleyo sinokuthi ngoku sizifumane kwimarike ukuze sikwazi ukucoca ngokucokisekileyo kunye nokuphucula ukusebenza kwePC yethu, ukongeza ekuphuculeni ukusebenza kwayo ngokubonakalayo, ngaphandle kokufomatha ikhompyuter yethu kwaye uqalise kwakhona ukufaka zonke iinkqubo ezihambelana noko kunye nabaqhubi.
Emva kokuba uNero TuneItPro s efakiwekwaye liphethe ukwenza ulawulo olupheleleyo lwalo lonke ulwazi oludlula kwikhompyuter yethu, ukusigcina sinolwazi ngalo lonke ixesha ngayo nayiphi na ingxaki yexesha elizayo enokuthi iveliswe ngokwendlela esisebenzisa ngayo ikhompyuter yethu.
Iimpawu zeNero TuneItPro
I-Nero TuneItPro ijolise ikakhulu kumanqaku amahlanu, amanqaku amahlanu abalulekileyo kwikhompyuter yethu ukuba asebenze njengosuku lokuqala, ezinje ngokusetyenziswa kunye nokuqaliswa kweWindows, ulawulo lweefayile ezisebenza ngasemva, ukukhawulezisa ukukhangela kwi-Intanethi, ukwandisa iiWindows kunye nabaqhubi abahlaziyiweyo ngamaxesha onke.
Ukulawula usetyenziso lwangemvelaphi
I-Chrome ibonakalisiwe kule minyaka idlulileyo njengenye yezona zikhangeli zibalaseleyo nezikhawulezayo esinokuzifumana ngoku kwintengiso. Kuyinyani-inyani, kuba iChannel ukuze ikwazi ukuvula ngokukhawuleza kunokuba uninzi lokhuphiswano, isebenza ngasemva ngalo lonke ixesha siqala uguqulelo lweWindows.
Kodwa ayisiyiyo i-Chrome kuphela, kodwa sinokufumana ezinye iinkqubo ekunokwenzeka ukuba asizidingi rhoqo. UNero TuneItPro uyakhathalela ukukhubaza zonke ezi zicelo ukuba ekuphela kwento abayenzayo kukusebenzisa inkumbulo kwaye benze ikhompyuter yethu icothe. I-Chrome ngumzekelo ocacileyo woku.
Ukuphucula inkqubo yokusebenza
Xa sigqiba ukufakela ukucoceka kwenkqubo yokusebenza, iMicrosoft iqinisekisa ukuba ukusebenza kwenguqulelo yethu yeWindows kulungiselelwe umatshini apho ufakwe khona. Ngokuhamba kwexesha oku kulungiswa kulahlekile, kulapho I-PC yethu iqala ukubonisa ukungasebenzi kwaye ngamanye amaxesha kuhamba kancinci.
I-TuneItro ibeka kuthi isixhobo esivumela ukuba sisebenzise ukusebenza kweWindows ngokubanzi, kubandakanya usetyenziso lwendalo, ezo zifakwe ngabantu besithathu, iinkonzo zenkqubo ... Xa zonke ezi fayile / usetyenziso azihambelani kunye, iPC yethu ayisoloko iyazi ukuba idubule phi, kwaye kuxa uqala ukucinga ngaphezulu kokuba kufanelekile xa kufuneka wenze inkqubo.
Abaqhubi bahlaziywa ngawo onke amaxesha
Nangona iWindows ilawula ukusoloko ifaka uguqulelo lwamva nje lwayo nayiphi na imveliso esiyiqhagamshela kwiPC yethu, ayilawuli ukujonga ukuba ngaba umvelisi ukhuphe uhlaziyo kuyo. I-TuneItro ikhathalela ukuyenza ngokuzenzekelayo, ukuze ngalo lonke ixesha sifumane okona kuluncedo kwizixhobo zethu nakwizinto ezisetyenziswayo kunye / okanye nakwizintoeziphelelisiweyo.
IMicrosoft isinika ukhetho olwahlukileyo ukuze sikwazi ukulawula ngalo lonke ixesha lolona lolona lungelelwaniso lusebenzayo lokusetyenziswa kwebhetri, kodwa ukuba ukhe wazama, ukwazile ukubona indlela Ngaphandle kokuba uyingcali, ulahleka ngokulula kwiimenyu zoqwalaselo.
Ngale sicelo, sinokulawula ukusetyenziswa kwamandla kwikhompyuter yethu kunye nekhompyuter yethu yekhompyuter ngokubanzi ngawo onke amaxesha, kuba xa ikwenziwa ngcono, kokuncinci kuya kufuneka ucinge kwaye iya kwenza iinkqubo ngendlela ekhawulezayo kwaye enamanzi ngakumbi.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, sifumene ukukhangela amanzi ngakumbi. Ngokuqinisekileyo ngezihlandlo okhe waqubisana nengxaki xa ubrawuza, kunye namaphepha ewebhu ozama ukufikelela kuwo ukucinga ngakumbi kunesiqhelo xa uvula. Ndiyabulela kule sicelo, sinako Lungiselela ngokuzenzekelayo olona qwalaselo lubalaseleyo kwisikhangeli sethu.
Raffle iphepha-mvume eli-2
INero TuneItPro inexabiso eliqhelekileyo le-24,95 euro yelayisensi. Ukuba sineekhompyuter ezingaphezulu kwenye ekhaya, sinokukhetha ukuthenga iphakheji yosapho olusinika iilayisensi ezintathu ze-euro ezingama-47,95 kuphela. Njengesiqhelo kolu hlobo lwezicelo, sinako Khuphela mahala ngokusebenzisa ikhonkco elilandelayo ukubona zonke iinketho asinika zona.
KwiActualidad Gadget siya kuthi Isipho semvume ezimbini zeNero TuneItPro ukuze ucoce kwaye usombulule zonke iingxaki zokusebenza ezibonakaliswa yiPC yakho. Ukuze ukwazi ukuthatha inxaxheba kwirafuli kufuneka wenze la manyathelo alandelayo.
Ukuthatha inxaxheba kwirafuli kufuneka wenze izinto ezintathu kuphela:
1- Landela igajethi yangempela kwi-Twitter okanye kwi-Instagram
2- RT nayiphi na i-tweet enxulumene noku kungena
3- Landela uNero kwi-Twitter kwiakhawunti: @ Nero_121pr
Iimvume ezimbini ziya kufumaneka kuni nonke ukuze niguqule iPC yenu ibe ngumatshini wenene
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Ukucoca nokukhawulezisa ukusebenza kwePC yakho kunye neNero TuneItUp
I-Mazda SKYACTIV-X, injini engacimiyo